रत्ननगर नगरपालीकाको बजेटमै अफ्रिकी गैंडा !
नेपालकै तेस्रो ठूलो पर्यटकिय गन्तब्य हो चितवन । चितवनकोपनि सबैभन्दा धेरै पर्यटक जाने ठाउँ सौराहा । त्यो रत्ननगर नगरपालिकामा पर्छ । नगरपालीकाका प्रतिनिधी, मेयर, उपमेयर र बाँकी अन्यको घर आँगनमै हिँड्छ एक सिंगे गैंडा । तर नगर पालिकाको बजेट निति, घोषणा र कार्यक्रममा राखेको फोटो हेर्नुस् त !
एन आर एन ए को केन्द्रिय निर्वाचन हुनै लागेको छ । केन्द्रिय सम्मेलन शुरुपनि भैसकेको छ । उम्मेदवारहरु मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यसमा महिला उमेदवारहरुको संख्या कम छ । केन्द्रिय निर्वाचनमा हुने दुई दर्जनभन्दा बढि पदमा महिलाको संख्या किन कम भयो ? किन महिलाहरुको एन आर एन एमा नेत्रित्वका लागि चाख बढेन ? पक्कैपनि बिगतका महिला नेत्रित्वकर्तालेपनि त्यो चाख बढाउन सकेनन् । महिलाहरुलाई एन आर एन एको चाख र चासो नेत्रित्वकर्ताका रुपमा बढाउन सकेनन् । त्यसकालागि अहिलेको नेत्रित्व छान्दा कम्तिमा मतदाताहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतीका आँखा छोप्न फोहोरमाथि विरुवा
तीनकुनेमा अग्लो डिल उठाएर रोपिएका यी बिरुवा अस्थायी हुन् र फोहोर छोप्ने उद्देश्यले रोपिएका हुन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । किनारमा दुबो बिछ्याउँदै गरेको पनि देखियो ।
-राजेन्द्र अधिकारी / हङकङ
तराई, पहाड, हिमालमा बस्नेका भाषा, पहिरन, संस्क्रिति र रहनसहन फरक भए जस्तै जिव जगतमापनि फरक थलो, भिन्न क्षेत्र र जात अनुसार आनीबानी, पहिरन, खान्की सबै फरक हुन्छ । फरक वासस्थान र भिन्न थलो, ठाउँ चिनेर फरक जाति र प्रजातिका जिवजन्तु अवलोकन गर्न पाउनुको रसस्वादन भिन्नै हुन्छ । यसमा चरम आनन्द त हुन्छ नै, प्रक्रितिमा लुकेका अनगिन्ति रहस्यहरुको ज्ञानपनि लिन पाइन्छ । प्रक्रितिका अनेक रुप र थलो चहार्दै हिँड्ने एक चराविद हुन्, राजेन्द्र अधिकारी । उनले हङकङबाटै प्रक्रितिमा रमाउने केहि जिवजगतलाई पहिचान गरेर आफ्नो क्यामरामा उतारेका छन् । ति मध्ये केहि तस्विरहरु नेपालप्लसमार्फत बाँडेका छन् ।
गोर्खालीको बिकास र संवृद्धिका लागि जर्मनीमा छलफल
गोरखाली समाज जर्मनीले हम्बर्गमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा ‘नेपाल वा गोरखा र गोर्खालीको बिकास र संवृद्धिका लागी एनआरएनएको भूमिका’भन्ने मुल विषयमा केन्द्रित रहेर बहस छलफल गरियो ।
भारतीय हस्तक्षेपबिरुद्द अमेरिकी राष्ट्रपती कार्यालयकै छेउबाट बिरोध प्रदर्शनको तयारि
पूर्व एन आर एन अध्यक्षलाई डेढ लाखको टेबल (प्रमाणसहित)
निर्वाचनमा यस्ता थिए घोषणा, कति पुरा गर्‍यो त नेकपाको सरकारले ?
बार्सिलोनामा ‘छ माया छपक्कै’
पशुपंक्षी जोगाउन दर्जनौं मानिस सडकमा नांगै
भिजिट नेपाल २०२० सफल पार्न स्पेनमा पर्यटन प्रवर्धन कक्ष तथा एन आर एन हेल्प डेक्स स्थापना
डेनमार्कमा पञ्चेबाजा घन्किएपछि 'वान्स मोर वान्स मोर'
नेताहरुको बिदेश भ्रमण आफैंले सिक्न कि कार्यकार्तालाई सिकाउन ?
भारतीय सेनाले यती देख्यो, नेपाली सेनाले भालु
नेपाल कयुनिष्ट पार्टीको प्रशिक्षणमा एन आर एनका नेतापनि !
कहिलेसम्म हामी कर तिरिरहने, मन्त्री र हाकिम हाम्रो करबाट मस्ती गरिरहने ?
एन आर एन ए युके उपमहासचिव अधिकारी एक साता देखी दुवईको जेलमा, समाचार गोप्य राख्ने प्रयास
सागर अधिकारी:नेपालमा बसोवास गर्ने आर्यमुलका
महिना छान्नुहोस् December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 November 2007 August 2007 April 2007 March 2007